सामाजिक सञ्जालमा भुवन र साम्राज्ञीबीच आरोप-प्रत्यारोप | Nepal Flash
सामाजिक सञ्जालमा भुवन र साम्राज्ञीबीच आरोप-प्रत्यारोप
अहिले सामाजिक सञ्जालमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र अभिनेता/निर्माता भुवन केसीबीच जुहारी नै चलिरहेको छ । उनीहरू एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
'नेपोटिजम'को विषयमा बहस चलिरहँदा साम्राज्ञीले आफूमाथि शोषण भएको आवाज उठाइन् । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै उनले आफूले काम गरेका ८ मध्ये ३ व्यानरले शोषण गरेको बताएकी छन् ।
साम्राज्ञीको यस अभिव्यक्तिपश्चात् 'ड्रिम्स' निर्माता भुवन केसीले एक स्टाटस लेख्दै आफूले डेब्यू गराएको चलचित्रकै कारण साम्राज्ञीले अहिले पनि काम पाइरहेको उल्लेख गरे । उनले 'जुन थालमा खायो, त्यही थाल दुलो पारेको' भन्दै आक्रोश पोखे ।
उनले लेखेका छन्, 'खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोई कराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन चलचित्रको नाम बेचेर खाइरहेकी छन् ? जुन थालमा खाने, त्यही थाल दुलो पार्ने ?'
यस कुरा साम्राज्ञीलाई पचेन । त्यसैले पुन: एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै साम्राज्ञीले भुवनको उत्तर फर्काएकी छन् । उनले व्यवहार नै त्यस्तै गरेकाले बोल्न बाध्य भएको बताएकी छन् ।
'एक जनाले जुन थालमा खायो, त्यही थालमा दुलो पार्योड भन्नुभयो । उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुभएको थियो भने यो अवस्था आउने नै थिएन । आज यो अवस्था आएकै उहाँले गर्दा हो’, साम्राज्ञीले नाम उच्चारण नगरी भुवनमाथि कटाक्ष गरेकी छन् ।
साम्राज्ञीले जापानमा भएको एउटा अवार्डको शिलशिलामा पनि भुवनले नराम्रो व्यवहार गरेको बताएकी छन् । भुवनले साम्राज्ञीलाई आफ्नो उत्पादन भएको भन्दै आइन्दा पुरानो कुरा नकोट्याउन धम्की दिएको साम्राज्ञीले आरोप लगाएकी छन् ।
त्यस समय भुवन आफूमा टाँसिन आएको पनि साम्राज्ञीको आरोप छ ।
उनले भनेकी छन्, 'उहाँले गालामा मुख जोडाएर छोरी, अब यस्तो नगर है भन्नुभयो । तै पनि म सुनिरहेँ ।'
#चलचित्र #भुवन केसी #साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह